Xorriyadda Saxaafadda | Martech Zone
Isniin, Janaayo 29, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Toddobaadkan wuxuu ahaa mid xiiso leh oo la xiriira Webka. Waxaan si adag u aaminsanahay hanti-wadaagga iyo xorriyadda labadaba. Waa laba dhinac oo miisaan miisaaman leh. Xoriyad la’aan, taajiriinta ayaa xukumi doona. Raasumaal la'aan, waligaa fursad uma heli doontid hanti.
Wax-ka-beddelka Koowaad ee Dastuurka: Shirweynuhu ma samaynayo sharci ku saabsan aasaasidda diinta, ama mamnuucaya ku-dhaqanka xorta ah; ama soo gaabinta xorriyadda hadalka, ama saxaafadda; ama xaqa ay dadku u leeyihiin inay si nabad ah isugu yimaadaan, oo ay ka codsadaan dowladda inay wax ka qabato cabashooyinka.
Waxaa muhiim ah in la xusuusto in markii dastuurka la qorayay, "Saxaafaddu" ay ahaayeen koox muwaadiniin rag-tag ah leh oo lahaa saxaafad aan loo baahnayn. Iyagu may ahayn shirkado waawayn oo ay hogaaminayeen doollarka wax xayeysiiya ee awoodda badan sida ay waayadan dambe yihiin. "Wargeysku" wuxuu inta badan ahaa mid cuqdadaysan, xaashi keli ah, oo lagu carqaladeeyo dawladda. Wargeyska ugu da'da weyn, Hartford Courant, xitaa waxaa dacweeyay Thomas Jefferson oo lagu eedeeyay able wuuna lumiyay.
Dhawaaq miyaa? Waa inay Waa wax badan sida yeelashada, dheh, degel ama baloog. Kani waa "Saxaafadda" xigta iyo boostada fudud ee loo yaqaan 'blog' waxay u egtahay inay u egtahay sida wargeysyadeena ay sameeyeen sanadihii ugu horreeyay ee waddankeena weyn. Ururada sida Aasaaska Aasaasiga ah ee Elektronik hubi in xorriyadahaas la sii ilaaliyay. Hal fiiri websaydhka EFF waxaadna ka heli doontaa daraasiin tusaalooyin ganacsi weyn ah oo isku dayaya inaad xulato wiilka yar.
Kadib markay lacagtu socoto, sheekadu ma isbadalaysaa miyaanay ahayn? Weriyeyaasha NBC waxaa laga helaa diyaarado la boodboodaya xayeysiiyayaal, khilaaf daneed. Muusikiisteyaashu waxay iloobaan maalmihii cidna qaddarin fankeeda, iyaguna way taageeraan RIAA si loola dagaallamo si loo sii wado kaydinta malaayiin si Masiixiyiintu u sii socon karaan socodka isla markaana loo iibsan karo qashinka xiga. Iyo websaydhada iyo shirkadaha internetka ee malaayiinta ilooba in ay ku bilaabeen hal ku dhufasho, hal badal.
Toddobaadkan wuxuu ahaa mid xiiso leh. Waxaan daawaday sida Robert Scoble uu u istaagay, mararka qaar xoogaa xoogaa yar, si loo hubiyo in amaahda shabakadda wax looga qabtay meeshii ay ahayd. Robert xitaa wuu is baarayaa oo wuxuu qirayaa inuu waxoogaa yar sii hurinayo oo uu ilaaway meeshii uu ka bilaabay. Way fiicantahay in la arko tan.
Waxaan sidoo kale daawaday sida GoDaddy uu u jeexjeexay oo u jaray mid ka mid ah macaamiishooda damac shirkad weyn. Shaki kuma jiro in GoDaddy uu lahaan lahaa marna ku sameeyay tan macmiil weyn. Waxay miisaameen halista, in kastoo, oo waxay qiyaaseen inay si fudud kaneeco uga sii daayaan gacantooda. Dhibaatadu waxay ahayd inay daadiyeen kaneeco khaldan. Hadda waxay haystaan ​​NoDaddy inay wax ka qabtaan. (Bixin buuxda: Waxaan astaanta ku sameeyay goobta NoDaddy caawa.)
Google hadda qiray in ay khalad ku galeen in ay ganacsi kaga furtaan dalka Shiinaha nooca faaf-reebka ah ee ay ku sameeyaan Mashiinka Raadinta. Cajiib. Waan ku faraxsanahay inay fahmeen sida tan dib ugu celineyso gacmaha waqtiga dadka dulman ee hela xorriyadda.
Waad ku mahadsan tahay xoriyadda Saxaafadda! Waad ku mahadsan tahay wanaagga Xorriyadda Internetka!
Baarkinka Dhigashada Miyuu Mudan Yahay?
Waxaan dooneynaa inaan ku guuleysano Supa Bowl!